Factlọ ọrụ ngwaahịa - Ndị na-emepụta ngwaahịa dị elu, ndị na-eweta ya
Washingsa Powder Vetikal Packaging Machine (VFFS)
Ejiri maka dosing nke ọka na ngwaahịa ọka, nwere oke nke otu granule / unit ruo 2-3g, dịka shuga, nnu, agwa, osikapa, lentil, pasta, noodles, akụ, musli, nri, pellets, oyi kpọnwụrụ, wdg.
Akpaaka Robot palletizer maka akpa
The robot palletizer bụ sistemụ palletizing na-agbanwe agbanwe nke e mere iji bulie akpa / bales / bundles site na onye na-ebufe ihe ma tinye ha n'ọnọdụ abụọ dị iche iche, otu n'akụkụ ọ bụla nke palletizer.
Automatic robot palletizer na gbatia wrapper (Stack & Kechie)
Ngwa oru ndi kwesiri: Ugbo, Nri, Chemicals, Pharmacy wdg. Dị ka osikapa, shuga, nnu, mkpụrụ, mmiri ara ehi ntụ ntụ, ncha ntụ ntụ, nri anụ ụlọ wdg.
Manual bagging System onwem na oké njọ erikpu usoro izute mba ụkpụrụ na-enye elu ziri ezi na ntụkwasị obi. Ihe dị mfe na ịrụ ọrụ siri ike na-eme ka arụ ọrụ zuru oke.
The GC bụ a akpa ibu akpa packer maka intermittent ngagharị ngwa nwere ike iru gbapụrụ ọsọ ruo 10 ikpe kwa nkeji, e mere na wuru maka ikpe mbukota nke obere akpa na akpa. Ọ bụ ihe ngwọta kachasị mma maka casing nke ngwaahịa ọ bụla bụ isi ya na akpa.
Caseer Packer Machine N'ihi obere akpa
Akpa na akpa Mepee Ọnụ akpa Placer, nchekwa na nso nso (Sachets na akpa)
The GW akpaka akpa placer usoro bụ zuru okè n'ihi na ibu ụlọ ahịa na mkpọsa achọ site ọbọ n'elu arụmọrụ arụmọrụ, ọ imewe kwere na collating nke obere pouches na vetikal ndokwa iche iche n'ime emeghe ọnụ akpa. Otu ahịrị, ahịrị abụọ n'otu n'otu ma ọ bụ abụọ na-ama jijiji nke sitere na arịrịọ ndị ahịa.
Secondary Packaging Bag Na Polywoven akpa mbukota Machine
A na-etinye ya ebe a na-etinye osikapa, shuga, mkpụrụ, nri anụ ụlọ, diaper na omo ntụ ntụ nri ndị a, ngwa ahịa na-arụ ọrụ ọkụ na ihe ọkụkụ.
Akpa na akpa mbukota igwe
Akpa na Bag Vetikal Bagging Machine
Rotary Akpakọba Isiokwu
Nchịkọta obere ngwugwu a ga-etinye na tebụl na-agbagharị agbagharị, ndị ọrụ nwere ike ịnọdụ ala ka ha nwee ike ịkụ ọkpọ, na-etinye ngwugwu.
Wepụ-ebu ebufe na nnyefe mmecha juru n'ọnụ pouches na ala nke vetikal bagging igwe ka mmepụta na ndị ọzọ na-arụ ọrụ-ojii.